L2 Gbanye Manufacturers & Suppliers - China L2 Gbanye Factory
S4600-28X / 52X-SI bụ L2 10G uplink nwere ọgụgụ isi mgba ọkụ mere maka ụgbọelu na MAN netwọk. Ọ na-akwado QoS zuru ezu, ọrụ VLAN dị elu (Dynamic VLAN, Voice VLAN, QinQ, N: 1 VLAN Translation wdg), Ethernet Ring Protection Protocol (G.8032), nhazi njikwa bandwidth, njikwa nchekwa nwere ọgụgụ isi, OAM (Ọrụ, Nchịkwa na Nlekọta) ), njikwa njikwa na ọrụ Triple-Play nke na-emezu ihe ntanetị chọrọ nke netwọkụ na-achọ, ohere MAN. S4600-2 ...
Usoro DCN S4600-SI zuru ezu GbE standalone switches na-enye ụlọ ọrụ-klas ohere maka campus na alaka ngwa. Ndị a n'ụzọ zuru ezu jisiri switches nwere ike inye elu Layer 2 atụmatụ nakwa dị ka nhọrọ Power n'elu Ethernet Plus (PoE +) ike. ọ na - ejikọta njikwa njikwa na ọrụ nchekwa iji nye arụmọrụ na scalability. Ọ bụ ezigbo ihe ngwọta maka ntinye ọrụ na nnweta nnweta netwọk. Igodo Key na Highlights Green Energy S4600-SI usoro kwekọrọ na IEEE ...
Usoro DCN S4200-SI na-akwụ ụgwọ GbE standalone na-akwụ ụgwọ dị irè na-enye ohere maka ụlọ ọrụ maka klas na ngwa alaka ụlọ ọrụ. Ndị a n'ụzọ zuru ezu jisiri switches nwere ike inye elu Layer 2 atụmatụ nakwa dị ka nhọrọ Power n'elu Ethernet Plus (PoE +) ike. Ezubere maka ịdị mfe ịrụ ọrụ iji belata ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke inwe, ha na-eme ka arụmọrụ azụmaahịa nwere ike ịbawanye, nke nwere nchebe, na nke nwere ume. Key Key na Highlights Green Energy S4200-SI usoro complies wi ...